Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka XFS waxay xayeysiineysaa shaqada Shan Boos – Radio Muqdisho
XAYAYSIIN BOOSAS BANNAAN
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka waxay ogeysiineysaa Aqoonyahanada Soomaaliyeed in Ururka Xakamaynta Ayaxa lama-degaanka ee Bariga Afrika (DLCO-EA) oo ah urur goboleed lagu asaasay Heshiis Caalami ah oo ay saxiixeen Wadamada kala ah: Jabuuti, Eriteeriya, Itoobiya, Keenya, Soomaliya, Koonfurta Suudaan, Suudaan, Tansaaniya iyo Yugandha Shaqadiisuna tahay xakamaynta dullinnada hayaama, gaar ahaan Ayaxa lama degaanka (Desert Locust) Shimbiraha isla-guura (Quelea birds) diirdiir (Fall army worm) iyo dukhsi Gindi (Tsets Fly) ee Bariga Afrika ka banaantahay ilaa Shan Boos waana sida hoos ku faah-faahsan.
Ururka wuxuu ku casumayaa codsadayaasha inay soo buuxiyaan araajida codsi boosaska Agaasime, Injineer Diyaaradeed iyo Duuliyayaal .
Codsaduhu waa inuu ka soo jeedo mid ka mid ah wadamada xubnaha ka ah heshiiska asaasidda Ururka.
1.2 Waqtiga Shaqada: 3 sano (Hal mar la cusboonaysiin karo)
1.3 Xarunta Shaqada: Addis Ababa, Itoobiya
1.4 Mushaharka iyo Faa’iidooyinka: Mushahar macno leh iyo xirmo faa;iidooyin ah oo la guddoon siin doono iyadoo saldhig looga dhigayo qaabka mushahar bixinta hay’adda.
1.5 Waajibaadka & Masuuliyadaha: inuu ka hoos shaqeeyo golaha maamulka ee ka kooban wasiirrada, Agaasimaha waxay noqonayaa sarkaalka fulinta u sareeya ee masuulka ka ah jihaynta siyaasadda guud iyo howlgalinta Ururka. Waajibaadka Agaasimaha waa inay noqotaa mid gundhigeedu yahay hubinta hoos u-daadajinta shaqooyinka ugu waawayn ururka oo ay ka mid tahay: 2
1.6.2 Tababarro jaamacadda ka dib ah oo ku saabsan Maamulka Dhaqaalaha / Maaraynta.
1.6.3 Waaya-aragnimo shaqo oo aan ka yarayn (7) sano oo heer maamul oo sare ah oo ku saabsan noocyada aqooneed ee la soo sheegay.
1.6.4 Da’da 35-59 sano.
1.6.5 Waxaa si wayn loo daneenayaa inuu lee yahay awood la soo tijaabiyay dhanka la shaqaynta dad ka soo kala jeeda wadamo kala duwan iyo dhaqanno kala jaan ah.
1.6.5 Waxaa aad loo dhiira gelinayaa musharixiinta dumarka inay soo codsadaan kuwaas oo ka faaideysandoona darajooyin dheeri ah.
(i) Sahannada hawada iyo xakamaynta dullinnada hayaama ee la isla gartay.
(ii) Barnaamijyada Cilmi-baaridda la hawl galiyay iyo wax-qabadka diiradda saaraya xakamaynta dullinnada hayaama, adeegsiga dullin-dilaha iyo bad-qabka.
(iii) Isku-xirka isu-socodka xogaha sare-u-qaadida saadaalinta dullinka hayaama; iyo
(iv) Horumarinta shaqaalaha.
Agaasimuhu waa inuu mas’uul ka noqdo:
(b) Gudbinta warbixinnada soo dhaca ee lugu aadinayo dowladaha xubnaha ka ah Ururka iyo Hay’adda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay iyo waliba dhinac walba oo rasmi ah oo goluhu u arko inay munaasib tahay in loo gudbiyo xogaha dhamaystiran ee dabeecadda Ayaxa la ma degaannaka iyo dullinyada kale ee hay’addu igmatay, horumarka cilmi-baaridda iyo cabirka heerka xakamaynta gobol;
(t) Hanashada iskaashi buuxa oo la la yeesho hay’adaha kale ee khuseeya talooyinka/jiheynta golaha wasiirada ee ururka;
(j) Aruurinta tabarrucaadka dowladaha xubnaha ka ah ururka;
(x) Gacan ku-haynta koonto xisaabeedyada dhaqaale ee ururka
1.6 SHAHAADOOYINKA LA ISKA RABO:
1.6.1 Ugu yeraan Master Cilmiga Beeraha ama wax u soo dhow oo ay bixisay jaamacad aqoonsi haysata.
2.0 Magaca jagada: Injineer Diyaaradeed (hal boos) 3
2.4.4. Da’da 25-50 sano
2.4.5. Inuu si hamsami leh ula shaqayn karo dad ka soo kala jeeda wadamo kala duwan iyo dhaqanno kala jaan ah waa muhiim.
2.4.6. Waxaa aad loo dhiira gelinayaa musharixiinta dumarka inay soo codsadaan kuwaas oo ka faaideysandoona darajooyin dheeri ah
2.1 Nooca Shaqada: Shaqaale Xirfadle ah
2.2 Waqtiga Shaqada: 3 sano (la cusboonaysiin karo)
2.3 Mushaharka iyo Faa’iidooyinka: Mushahar macno leh iyo xirmo faa;iidooyin ah oo la guddoon siin doono iyadoo saldhig looga dhigayo qaabka mushahar bixinta ururka.
Injineer Diyaaradeed wuxuu mas’uul ka yahay shaqada dayactirka maalinlaha ee diyaaradaha ururka, agabyada kale ee yaala saldhigyada iyo diyaaradaha ururka ee ka shaqeeya ururka dhexdiisa ama dibadiisa. Intaa waxaa dheer inuu qabto waajibaadkii kale ee ay u wakiishaan madaxa injineerada ama injeerada ka sareysa.
2.4 SHAHAADOOYINKA LA RABO:
2.4.1. Dibloma ama wax ka sareeya Aeronautical Engineering (A &C) ama wax dhigma
2.4.2 Rukhsad gacan ku hayn injineernimo diyaaradeed ((professional Aircraft Engineering License (A & C)) taas oo kasoo baxdey hay’ad hubisa badqabka diyaaradaha oo la aqoonsanyahay islamarkaana ay ku caddahay in rukhsad sidaha uu ku takhasusey (piston engines).
2.4.3. Ugu yaraan 3 sano oo waaya aragnimo qaybta (piston engines).
3.0 Magaca jagada: Duuliye wax buufiya (Saddex boos)
3.1 Nooca Shaqada: Shaqaale Xirfadle ah
3.2 Waqtiga Shaqada: 3 sano (la cusboonaysiin karo)
3.3. Mushaharka iyo Faa’iidooyinka: Mushahar macno leh iyo xirmo faa;iidooyin ah oo la guddoon siin doono iyadoo saldhig looga dhigayo qaabka mushahar bixinta hay’adda.
Duuliyaha wuxuu mas’uul ka yahay badqabka iyo habsami u socodka duulimaadyada loo xilsaaarey iyo inuu duulimaadyada u fuliyo si waafaqsan qorsha hawleedka guud. Intaa waxaa dheer inuu qabto waajibaadkii kale ee ay u wakiisho madaxa duuliyayaasha.
3.4 Shahaadooyinka la rabo:
3.4.1 Rukhrad duuliyenimo (CPL)
3.4.2 Ugu yaraan waa inuu diyaarad duuliyey wadarta (1,000) saacadood
3.4.3 Da’da 25-50 sano
3.4.4 Khibrad buufinta beeraha, qiimaynta tilmaamaha , Dibloma ama wax ka sareeya oo Saynis ah waxay faa’ido dheeri tahay codsadaha.
3.5.5 Waxaa aad loo dhiira gelinayaa musharixiinta dumarka inay soo codsadaan kuwaas oo ka faaideysandoona darajooyin dheeri ah
Sida loo codsanayo: 5
Si aad u codsatid, booqo mareegtayada www.dlco-ea.org ama la soo dag foomka ay ku hoos qorantahay “News and Events/Vacancies and Announcements”. Qofkii daneenaya wuxuu buuxin karaa foomka la tilmaamay isagoo ku lifaaqaya warqadda ajiga (Cover latter), CV faahfaahsan iyo nuqullo ka mid ah shahaadooyinka. Waxaa wakhtiga codsi qaabiliddu ku egyahay 30 bari oo ka 3da luulyo 2020.
basgedom@gmail.com / berhane@dlcoea.org
Nuqul caadi ah farta ka saar :
Wadada CMC – saacadaha shaqada inta lugu jiro (8.00 a.m to 4.30pm)
Gacanta uga dhiib:
Wakiilka Xarumeedka DLCO-EA